प्रधानमन्त्री ओलीले दिए गगन थापालाई यस्तो जवाफ, ‘म महाराजा होईन, राजा फालेर आएको मान्छे हुँ’..? कारण यस्तो छ ? | DON Nepal प्रधानमन्त्री ओलीले दिए गगन थापालाई यस्तो जवाफ, ‘म महाराजा होईन, राजा फालेर आएको मान्छे हुँ’..? कारण यस्तो छ ? – DON Nepal
Home डन समाचार प्रधानमन्त्री ओलीले दिए गगन थापालाई यस्तो जवाफ, ‘म महाराजा होईन, राजा फालेर आएको मान्छे हुँ’..? कारण यस्तो छ ?
By Don NepalMay 30, 2018, 16:57 pm 1
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालकृष्ण ढुंगलको कैद मिनाह नियम कानुन अनुसार नै भएको बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगेललाई आफूले व्यक्तिगत रुपमा नचिन्ने बताए । सँगै रहेको संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई हिजो छुटेको के ढुंगेल अरे भन्दै सोधेर सम्बोधन सुरु गरेका उनले भने, ‘बालकृष्ण ढुंगेललाई मैले भनेको पनि छैन, चिन्दा पनि चिन्दिनँ ।’
Previous Postब्यथा लागेर अस्पताल जाँदाजाँदै अस्पतालको करिडोरमै यसरी जन्मियो बच्चा ! जुन विश्वभर भाइरल बन्यो (फाेटो फिचर) Next Postरुकुममा सम्भोग गर्दागर्दै एक महिलाको मृत्यु
One thought on “प्रधानमन्त्री ओलीले दिए गगन थापालाई यस्तो जवाफ, ‘म महाराजा होईन, राजा फालेर आएको मान्छे हुँ’..? कारण यस्तो छ ?”